देशमा सात वटा तर पत्रकारहरुको लागि १० वटा प्रदेश – MySansar
देशमा सात वटा तर पत्रकारहरुको लागि १० वटा प्रदेश
Posted on August 19, 2017 by Salokya
देशमा कति वटा प्रदेश छन्? संविधान लागू भइसकेपछि नेपालमा कूल सात वटा प्रदेश भएको कुरा सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। तर पत्रकारहरुका लागि भने सात वटा प्रदेश पर्याप्त छैन। नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न चुनावका लागि १० वटा प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय निर्वाचन समितिद्वारा जारी निर्वाचन कार्यविधि निर्देशिका, २०७४ मा यसरी १० वटा प्रदेशको व्यवस्था गरिएको हो। सात वटा त संविधानकै प्रदेश भइहाले, बाँकी तीन वटा कुन त? आउनुस् हेरौँ।
थप तीन वटा प्रदेश कहाँबाट आए देखिहाल्नुभयो होला। एउटा प्रदेश उपत्यका प्रदेश भइहाल्यो। यसमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका सदस्यहरु हुने भए।
बाँकी दुई वटा प्रदेश चाहिँ गैर भौगोलिक प्रदेश रहेछन्। एउटा एसोसिएट अर्को प्रतिष्ठान। एसोसिएट भनेको पत्रकार महासंघसँग आवद्ध भएका संस्थाहरु। प्रतिष्ठान भनेको चाहिँ विभिन्न मिडियाका खुलेका शाखाहरु जस्तै कान्तिपुर, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल आदि।
पत्रकार महासंघको नेतृत्वका लागि हुने निर्वाचनमा सबै सदस्यले मतदान गर्न पाउँदैनन्। सदस्यहरुले केन्द्रीय पार्षद्हरु चुन्छन् अनि तिनै पार्षद्हरुले काठमाडौँ आएर केन्द्रीय पदाधिकारीहरुलाई मतदान गर्छन्।
1 thought on “देशमा सात वटा तर पत्रकारहरुको लागि १० वटा प्रदेश”
RK Magar says:
पदको लागी प्रदेश बढाएको हुनु पर्छ
LeaveaReply to RK Magar Cancel reply